Faka isicelo se-Turkey Visa Application Online, Thola i-Turkey Visa Online, i-Tourist Visa
I-Republic of Turkey Electronic Visa Application System
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zaseMelika
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zase-Australia
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zaseChina
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zaseNingizimu Afrika
I-Visa yaseTurkey Yezakhamizi ZaseCanada
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zaseMexico
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zase-Bahrain
I-visa yaseTurkey yezakhamizi zase-Emirati
Inqubo yesicelo se-eVisa yaseTurkey
Izidingo ze-eVisa zaseTurkey
Izinhlobo ze-eVisa zaseTurkey
Uhlangothi lwaseYurophu lwe-Istanbul
Izivakashi ezikhangayo zase-Istanbul
Izinto Eziphezulu Okufanele Uzenze e-Ankara
Izindawo Ezikhangayo Zokuvakasha Eziphezulu e-Izmir
Ukuvakasha kwasebusika eTurkey
Amaswidi namaswidi aseTurkey adumile
AmaMosque amahle kakhulu eTurkey
Amachibi nezimangaliso zaseTurkey
Kufanele Ubone I-Scenic Turkey
Kumele Ubone Amabhishi eTurkey
Kufanele Ubone Izingadi eTurkey
Imikhawulo yokuhamba nokungena ngo-2022
I-Turkey eVisa (Ukugunyazwa Kokuhamba Nge-elekthronikhi)
I-Turkey Visa Online iyisigunyazo sokuhamba nge-elekthronikhi esasetshenziswa kusukela ngoJulayi 2016 nguHulumeni waseTurkey. Le nqubo eku-inthanethi ye-Turkey e-Visa inika umnikazi wayo ukuhlala isikhathi esingafika ezinyangeni ezi-3 ezweni.
1. Gcwalisa isicelo se-eVisa
2. Thola i-eVisa nge-imeyili
3. Ngena eTurkey
Iyini iTurkey eVisa noma iTurkey Visa Online?
I-eVisa yaseTurkey idokhumenti eku-inthanethi enikezwe uHulumeni waseTurkey lokho kuvumela ukungena eTurkey. Izakhamizi zamazwe afanelekile ziyadingeka ukuthi zigcwalise le Ifomu lesicelo se-visa yaseTurkey ngemininingwane yabo siqu kanye nemininingwane yepasipoti kule webhusayithi.
I-eVisa yaseTurkey is ama-visa amaningi wokungena lokho kuvumela ukuhlala izinsuku ezingafika kwezingu-90. I-eVisa yaseTurkey isebenza ngezinjongo zokuvakasha nezohwebo kuphela.
I-Turkey Visa Online iyatholakala isebenza izinsuku eziyi-180 kusukela ngedethi yokukhishwa. Isikhathi sokuqinisekisa se-Turkey Visa Online yakho sihlukile kunesikhathi sokuhlala. Ngenkathi iTurkey eVisa isebenza izinsuku eziyi-180, ubude besikhathi sakho ayikwazi ukweqa izinsuku ezingama-90 phakathi kwezinsuku eziyi-180. Ungangena eTurkey nganoma yisiphi isikhathi phakathi kwezinsuku eziyi-180 zokuqinisekisa.
I-Turkey eVisa iqondile futhi exhunywe nge-elekthronikhi nepasipoti yakho. Izikhulu ze-Turkey Passport zizokwazi ukuqinisekisa ukufaneleka kwe-Turkish eVisa ohlelweni lwazo endaweni yokungena. Kodwa-ke, kuhle ukuthi ugcine ikhophi ethambile ye-Turkey eVisa ezothunyelwa kuwe nge-imeyili.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukusetshenzwa kwesicelo se-visa yaseTurkey
Nakuba izicelo eziningi zicutshungulwa kungakapheli amahora angama-24, kuyancomeka ukuthi ufake isicelo se-Turkey eVisa okungenani amahora amabili ngaphambi kokuthi uhlele ukungena ezweni noma ugibele indiza yakho.
Turkey Visa Online kuyinqubo esheshayo edinga ukuthi ugcwalise i Isicelo se-visa yaseTurkey ku-inthanethi, lokhu kungathatha imizuzu emihlanu (5) ukuqeda. Lena inqubo ye-inthanethi ngokuphelele. I-Turkey Visa Online ikhishwa ngemva kokuba ifomu lesicelo seligcwaliswe ngempumelelo nemali ekhokhwa ngumfakisicelo nge-inthanethi. Ungenza inkokhelo ye-Turkey Visa Application usebenzisa ikhadi lesikweletu / lasebhange noma i-PayPal ngezinhlobo zemali ezingaphezu kwe-100. Bonke abafake izicelo kuhlanganisa nezingane kudingeka ukuthi bagcwalise I-Turkey Visa Application. Lapho isikhishiwe, i I-eVisa yaseTurkey izothunyelwa ngqo ku-imeyili yomfakisicelo.
Isibuyekezo se-Covid se-Turkey eVisa
I-Turkey Govt ivule i-broder yayo yezokuvakasha yamazwe ngamazwe kubo bonke abahambi ngenjongo yezokuvakasha nebhizinisi. Kodwa-ke, abahambi abaya eTurkey kufanele bazi ngemikhawulo yamanje yokuhamba ye-COVID-19:
Amakhiwokhi we-eVisa wokuzisiza waseTurkey nezindawo ze-wifi ezikhumulweni zezindiza zaseTurkey zizosuswa. Ngakho-ke, ukuthola i-eVisa lapho ufika ngeke kusatholakala futhi izivakashi ezivakashela eTurkey kuzodingeka zifake izicelo ze-eVisa kusenesikhathi.
Abahambi abaneminyaka engu-6 nangaphezulu kufanele babe nokuhlolwa okune-COVID-19 PCR okuthathwe kungakapheli amahora angama-72 ngaphambi kokuhamba.
Abagibeli kumele bethule okuqediwe Ifomu Lokungena Kokuhamba lapho ubheka indiza nalapho ufika
Abafikayo ababe seBrazil, India, noma eNingizimu Afrika ezinsukwini eziyi-10 ezedlule kumele bahlaliswe bodwa izinsuku eziyi-14.
Ubani ongafaka isicelo seTurkey Visa Online
Izizwe zakwamanye amazwe ezifisayo ukuya eTurkey ngezinjongo zokuvakasha noma zebhizinisi kufanele ufake isicelo se-visa evamile noma yendabuko noma Isigunyazo Sokuhamba Nge-elekthronikhi esibizwa Turkey Visa Online. Ngenkathi ukuthola i-Visa yaseTurkey yendabuko kubandakanya ukuvakashela inxusa eliseduze laseTurkey noma inxusa, izakhamizi ezivela Amazwe afanelekile e-Turkey eVisa angathola i-eVisa yaseTurkey ngokugcwalisa ifomu elilula lesicelo se-Turkey Visa.
Abafakizicelo bangafaka isicelo se-Turkey eVisa kumaselula abo, ithebhulethi, i-PC noma ikhompuyutha futhi bayithole ebhokisini lemiyalezo engenayo le-imeyili ngokusebenzisa lokhu. Ifomu lesicelo se-visa yaseTurkey. Abanikazi bamazwe nezindawo ezilandelayo bangathola i-Turkey Visas Online ngemali ekhokhwayo ngaphambi kokufika. Isikhathi sokuhlala kweziningi zalezi zizwe izinsuku ezingama-90 phakathi nenkathi yezinyanga eziyisithupha (6).
Abanikazi bamazwe nezindawo ezilandelayo bangathola i-Turkey Visa Online ngemali ekhokhwayo ngaphambi kokufika. Isikhathi sokuhlala kweziningi zalezi zizwe izinsuku ezingama-90 phakathi kwezinsuku eziyi-180.
I-eVisa yaseTurkey isebenza isikhathi esiyizinsuku eziyi-180. Isikhathi sokuhlala kweziningi zalezi zizwe izinsuku ezingama-90 phakathi nenkathi yezinyanga eziyisithupha (6). I-Turkey Visa Online iyinhlangano ama-visa amaningi wokungena.
I-eVisa yaseTurkey enemibandela
Abanikazi bamazwe alandelayo banelungelo lokufaka isicelo sokungena okukodwa I-Turkey Visa Online abangahlala kuyo kuze kube yizinsuku ezingama-30 kuphela uma benelisa imibandela ebalwe ngezansi:
Zonke izizwe kumele zibe ne-Visa evumelekile (noma i-Tourist Visa) evela kwenye yazo Amazwe aseSchengen, Ireland, United States noma United Kingdom .
Zonke izizwe kumele zibambe Imvume Yokuhlala kwelinye lama Amazwe aseSchengen, Ireland, United States noma United Kingdom
Qaphela: Ama-visa kagesi (i-e-Visa) noma izimvume ze-e-Residence azamukelwa.
Izidingo zaseTurkey Visa Online
Abahambi abahlose ukufaka isicelo se-Turkey eVisa kumele bafeze le mibandela elandelayo:
Ipasipoti yomfakisicelo kufanele ibe isebenza okungenani izinyanga eziyi-6 ngemuva kosuku lokuhamba, lelo usuku lapho usuka eTurkey.
Umfakisicelo uzothola i-eVisa yaseTurkey nge-imeyili, ngakho-ke i-ID ye-imeyili esebenzayo iyadingeka ukuze ugcwalise ifomu lesicelo se-Turkey Visa.
Kusukela Ifomu lesicelo se-visa yaseTurkey itholakala kuphela ku-inthanethi, ngaphandle kwephepha elilinganayo, kudingeka ikhadi elivumelekile lesikweletu/ledebhithi. Zonke izinkokhelo zicutshungulwa kusetshenziswa Vikela isango lokukhokha le-PayPal.
Ulwazi oludingekayo lwefomu lesicelo se-visa yaseTurkey
Abafakizicelo be-eVisa baseTurkey bazodinga ukuthi banikeze imininingwane elandelayo ngesikhathi sokugcwalisa ifomu lesicelo se-Turkey Visa:
Igama, isibongo kanye nosuku lokuzalwa
Inombolo yephasiphothi, usuku lokuphelelwa yisikhathi
Amadokhumenti umfakisicelo we-Turkey Visa Online angase abuzwe emngceleni waseTurkey
Umfakisicelo angase acelwe ukuthi anikeze ubufakazi bokuthi angakwazi ukuzondla ngokwezimali futhi azisekele ngesikhathi ehlala eTurkey.
Umfakisicelo kungase kudingeke ukuthi abonise ukuthi uhlose ukuhamba eTurkey ngemva kokuphela kwenjongo yohambo lapho i-e-Visa yaseTurkey eyasetshenziswa khona.
Phrinta i-eVisa yakho yaseTurkey
Ngemva kokwenza inkokhelo ngempumelelo yesicelo sakho saseTurkey Visa, uzothola i-imeyili equkethe i-eVisa yakho yaseTurkey. Lena i-imeyili oyifakile efomini lesicelo se-visa yaseTurkey. Kutuswa ukuthi ulande futhi uprinte ikhophi ye-eVisa yakho yaseTurkey.
I-visa yakho esemthethweni yaseTurkey isilungile
Ngemva kokuphrinta ikhophi yakho Turkey Visa Online, manje ungavakashela iTurkey ku-Visa yakho Esemthethweni yaseTurkey futhi ujabulele ubuhle namasiko ayo. Ungahlola izinto ezifana neHagia Sophia, Blue Mosque, Troy nezinye eziningi. Ungaphinda uthenge okuqukethwe yinhliziyo yakho e-Grand Bazaar, lapho konke kutholakala khona kusukela kumabhantshi esikhumba kuya kubucwebe kuya ezintweni eziyisikhumbuzo.
Kodwa-ke, uma ucabanga ukuvakashela amanye amazwe aseYurophu, udinga ukwazi ukuthi i-visa yakho yokuvakasha yaseTurkey ingasetshenziswa kuphela eTurkey futhi alikho elinye izwe. Kodwa-ke, izindaba ezinhle lapha ukuthi i-visa yakho esemthethweni yaseTurkey isebenza okungenani izinsuku ezingama-60, ngakho-ke unesikhathi esanele sokuhlola yonke iTurkey.
Futhi, njengoba ungumvakashi eTurkey ku-eVisa yaseTurkey, udinga ukugcina ipasipoti yakho iphephile ngoba iwukuphela kobufakazi bokuhlonza oyobudinga njalo. Qiniseka ukuthi awukulahlekeli noma awushiyi ulele.
EZINYE ZEZINHLE EZIBALULEKE KAKHULU ZOKUQUQUZA I-E-VISA YAKHO YASE-TURKEY KU-inthanethi.
Skrolela kwesokunxele nakwesokudla ukuze ubone okuqukethwe kwetafula
I-e-VISA TURKEY AMAZWE AFANELEKILE
I-e-VISA TURKEY APPLICATION PROCESS
IZINHLOBO ZE-e-VISA TURKEY
I-e-VISA TURKEY FAQ
UKUVAKASHELA KWASEBUSIKA E-TURKEY
AMACHIBI NEZIMANGALISO ZASE turkey
IZIVAKASHI EZIKHANGISWAYO ZASE-ISTANBUL
UHLANGO LWASE-EUROPE LWE-ISTANBUL
KUMELE UBONE IZIGADI E-TURKEY
AMASWEKITHI E-TURKISH ADUMILE
Umusho wokuzihlangula: I-eVisa yaseTurkey ekhishwe yile webhusayithi yezohwebo isetshenziswa ngqo kuwebhusayithi kaHulumeni waseTurkey. Uhulumeni waseRiphabhulikhi yaseTurkey akaqoka i-www.turkey-visa-online.org ngokuqondile, ngokungaqondile noma ngokukhethekile. Inkokhelo yobungcweti ikhokhiswa izinkonzo zethu kanye ne-Government Visa Levy kulabo abafaka izicelo kule webhusayithi.